EA028 - Fanairana manokana an'ny OMG 130dB - Jiro LED - Fanamafisana ny tadin'ny tariby | Vahaolana OMG
EA028 - Fanairana manokana an'ny OMG 130dB - Jiro LED - Famerenana ny tadin'ny Rip
LOUDER AND LONGER: Fanairana fanairana tsy misy alalana / Panic 130dB izay manintona fahefana avy amin'ny AAA batteries. Mihazakazaka avo roa heny izy io (tena 130dB volavolan-dalàna) ary indroa isaky ny ora (fara fahakeliny isaky ny ora mampihetsi-po) mihoatra noho ny fanairana manokana
HAMPIHARANA: Ny ankamaroan'ny fanairana dia mampiasa batterie famantaranandro. Ity dia mampiasa batterie AAA adidy mavesatra. Mety manana bateria soloina mipetraka manodidina ny tranonao any ho any ianao. Ireo bateria AAA no tsiambaratelon'ny fiakarana mafy ataon'ny alarme. Haharitra hatramin'ny 365 andro izy ireo alohan'ny handinihanao ny fanoloana azy ireo.
ASA FAMPANDROSOANA: Ampidiro ny rofia amin'ny fingotra miaraka amin'ny fametahana fametahana grenady mirefotra mandritra ny ora 1 amin'ny fanairana tsy tapaka
LED FLASHLIGHT: Lamina fotsy hoditra mamiratra miloko fotsy ho an'ny hazavana avy hatrany. Ny jiron'ny fanaovan-jiro dia bara mitsilopilopy, nefa miasa ho an'ny fingotra fohy ilainao izany.
Manana fanairana 130dB izany. Natao mba hapetraka any amin'ny paosin'ny fonosana na kitapo kitapo, ny ea028 dia mety ho entin'ny joggers ihany koa. Ny alam-barotra dia mavitrika amin'ny fisintonana ny pin, izay manakana ireo mpanafika na mpitsoka-ponenana saingy miasa koa mba hisintona ny saina ho anao raha mila fitsaboana na fanampiana ianao. Ny fampiasana fanairana manokana dia manova ny singa iray tsy ampoizina amin'ny mpanafika amin'ny mety ho lasibatra.
Isaky ny andro dia mitondra fanairana
Ny ea028 dia mety tsara amin'ny paosy kely pataloha jeans, paosy any ivelany misy kitapo na kitapo, na entina tanana. Ny fitondrana fanairana manokana dia dingana iniana kendrena mankany amin'ny filaminan'ny tena manokana, ary ny fihetsika mitondra ny fanairana dia mampiakatra ny fiambenan'ilay mpitatitra amin'ny manodidina azy ireo. Tsy toy ny vokatra fiarovan-tena hafa toa ny Tasers, ny fanairana manokana dia tsy azo ampiasaina hamely anao mihitsy. Ary satria ara-dalàna ny mitondra na aiza na aiza, ny ea028 no fitaovana fiarovan-tena mety indrindra ho an'ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra, na inona na inona fahaizana, ary na aiza na aiza.
Fanaovana hazavana LED ho an'ny fanandramana haingana amin'ny jiro mandritra ny androm-piainana
Ny ea028 dia misy ihany koa ny jiro LED mipoitra, mavitrika amin'ny fisitahana / ondana misaraka, ho an'ny fampiroboroboana haingana sy mandeha amin'ny lalan-dàlana, fiara varavarana fiara, na toe-java-manify hafa. Ny jiro LED dia maharitra mandritra ny androm-piainany ary tsy mila ovaina intsony.
Ny bateria AAA mahazatra dia efa vita mialoha, saingy azo soloina ny mpampiasa. Voahidy ao anaty efitrano bateria mihidy izy ireo ary nakatona amin'ny visy micro Philips ka tsy azon'ireo olon-dratsy esorina ireo bateria. Rehefa tonga ny fanairana anao dia hanana takelaka plastika mazava izay hongotanao ary ario mba hampandeha ny fanairana amin'ny maody miantona. Ny bateria dia haharitra herintaona alohan'ny tianao hanoloana azy ireo amin'ny bateria AAA mavesatra. Ampiasao ny bokotra maivana mba hanomezana maso fanairana haingana ny fanairana anao nefa tsy misintona ny tadiny.
Ny tsara ho an'ny alina dia mandeha eny amin'ny campus na ny manodidina anao
Ny fanairana manokana dia iray amin'ireo ampaham-bidy haingana indrindra amin'ny varotra amin'ny indostrian'ny fiarovan-tena, satria ny fahavalo ratsy indrindra amin'ny mpanafika dia ny fifantohana. Ara-dalàna ny fanairana manokana alefa any amin'ny fanjakana 50 (na dia amin'ny fiaramanidina na any an-tsekoly aza!) Ary fomba fiarovana sy tena mahomby amin'ny fiarovana tena. Tsy mila fampiofanana na fahaiza-miasa izy ireo, ary azon'ny rehetra ampiasaina na iza na iza, na firy taona izy na fahaizany ara-batana. Ireo polisy, mpiambina fiarovana sy fiarovana amin'ny oniversite dia manome soso-kevitra ny fampiasana fanairana momba ny fiarovana manokana. Ireo tra-boina matetika dia voa mafy loatra ka miantsoantso vonjy amin'ny toe-javatra tsy mahazatra sy mampidi-doza, mampitombo ny fahalemeny. Ny fampandrenesana avo lenta dia natao hampitahorana ny mpanafika rehefa mamindra ilay singa tsy nampoizina avy amin'ilay nanafika ho any amin'ilay niharam-boina. Ireo olon-dratsy dia tsy tia manintona ny saina, ary azo inoana fa handositra rehefa mahatsapa izy ireo fa tsy azo ajanona ny fanairana.
Ny ea028 dia mety tsara ho an'ny tanora, mpikaroka amin'ny kolejy, sambo alina, mpiasa an-jatony, joggers, zokiolona, ​​mpitsabo mpanampy / mpiasa, mpanolotra / lalana.
Ahoana ny faniriana 130dB?
Ny decibel (nohafohezina dB) no singa ampiasaina handrefesana ny haben'ny feony. Ny sofin'ny olombelona dia mora tohina. Ny sofinao dia maheno ny zava-drehetra manomboka amin'ny tendron'ny rantsan-tànanao miborosy moramora ny hoditrao mankany amin'ny motera jet mahery. Raha eo amin'ny lafiny herinaratra dia 1,000,000,000,000 mahery mahery ny feon'ny motera jet raha oharina amin'ny feo kely indrindra ren'ny sofinao. Hafa be izany!
Amin'ny ambaratonga decibel, ny feo heno kely indrindra (manakaiky ny fahanginana tanteraka) dia 0 dB. Ny feo iray mahery 10 heny mahery dia 10 dB. Feo mahery 100 heny mahery noho ny fahanginana tanteraka dia 20 dB. Feo mahery 1,000 30 mahery mahery noho ny fahanginana tanteraka dia 140 dB. Ity ambany ity ny lisitr'ireo feo iraisana sy ny haavon'ny desibel azy, ary koa ny sasany amin'ireo fanairana ataontsika raha ampitahaina. Ny fahasimban'ny fandrenesana dia mety hitranga amin'ny 125dB, ary ny volavolan-dalàna tsara indrindra ho an'ny fanairana manokana dia 135dB - XNUMXdB.
50 dB vintana
Masinina fanasana 50 - 75 dB
AC - 50 dB
Mpanisa herinaratra 50 - 80 dB
55 - 70 dB fanasana vilia
60 - 85 dB fanadio banga
60 - 95 dB fanamainana volo
Famantaranandro fanairana 65 - 80 dB
75 - 85 dB fandroana fandroana
80 dB mitelefaonina an-tariby
110 dB zaza mitomany
Metro 90 - 115 dB
Moto 95 - 110 dB
110 dB tandroka fiara
112 dB CD mpilalao ambony
117 dB baolina kitra (kianja)
130 dB jackhammer, biriky fitondra
130 dB Mahagaga PPS8 Alarm
140 dB ny fihenan'ny fihenan-tsofina dia mipoitra amin'ny fiatoana maharitra
140 dB fiaramanidina miala
150 dB mpamono afo
162 dB fandroana (amin'ny tongotra 3)
170 dB grenady
3 X 3 X 3 santimetatra
11100 Total Views 9 Views Today
EA052 - OMG Wireless Wristband Personal Emergency…